ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက် BVI LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
BVI LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးက BVI လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) နိုင်ငံခြားသားများမဆိုကြင်နာ၏ဒေသဆိုင်ရာအဘယ်သူမျှမအခွန်အခများနှင့်အတူတစ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေးထားပါတယ်။
မူလက, 1984 ၏ British Virgin Islands နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ Ordinance created နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBC) ရှိရာ 600,000 ကျော်တစ်ဦးဥပဒေသစ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ IBC အမျိုးအစားများကိုအဆုံးသတ်သောညီမျှအဖြစ်နိုင်ငံခြားနှင့်ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းထည့်သွင်းရန်ပြဋ္ဌာန်းအခါ 2004 သည်အထိကဲ့သို့သောထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကဒေသခံ (ပြည်တွင်း) ကုမ္ပဏီများမှခွဲခြားဆက်ဆံနှင့်တစ်ဦးဥပဒေသစ်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြု "ခွဲခြားဆက်ဆံမှု" ၏ဒီ type ပပျောက်ဖို့လိုအပျခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်: ဒီနည်းကိုရေးသားခြင်း BVI အမေရိကန်ကော်ပိုရိတ်နှင့်ညီမျှနေသော "လီမိတက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု" ရှိပါတယ်အဖြစ် NO BVI LLC ဥပဒေပြုရှိပါသည်။ WHEN တွင် BVI ပါဘူး PASS, LLC ဥပဒေပြုဒီတော့ဒီဆောငျးပါးအနာဂတျရည်ရွယ်ချက် IS ။ အဲ့ဒီအချိန်အထိကျနော်တို့ Nevis LLC အကြံပြုပါသည်။
2004 ၏ BVI ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (လျှော့ခြင်း, "အက်ဥပဒေ") ဖွဲ့စည်းရေး, လက်ခံနိုင်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် LLC ၏ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။ ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီအများအပြားမျိုးအက်ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါနေစဉ်, နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးရှယ်ယာများကကန့်သတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ LLC အပေါင်းတို့၌ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
ဥပမာ British Virgin Islands (BVI) သည်ကာရစ်ဘီယံထဲမှာ Puerto Rico အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ 1672 ကတည်းကဒါဟာဗြိတိသျှပိုင်နက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်တအိမ်တည်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦး "ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာပါလီမန်မှီခို" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဧကရာဇ်အင်္ဂလန်ရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်သည်။
လက်ရှိတွင် BVI စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ဗြိတိန်ပြည်ပနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ စင်ကြယ်သောရပ်တည်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစင်တာအဖြစ်၎င်း၏နိမ့်ပရိုဖိုင်းကမ်းလွန်အခွန်ဟေဗန်ကူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်ခဲ့သော backlist များထဲကတစ်ခုကိုစောင့်ရှောက်။
တစ်ဦးက BVI လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများ LLC သည်အားလုံးကိုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ LLC ရဲ့ဆန့်ကျင်ပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာမြို့တော်မှလုပ်သာပံ့ပိုးမှုများကို LLC သည်ရဲ့အကြွေးထိတွေ့လျက်ရှိသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိက: အဘယ်သူမျှမအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအကြိုးပိုင်ရှင်တွေ, ဒါရိုက်တာ, ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များ်တည်ရှိနေ။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: LLC သည် သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• စာရင်းစစ်သို့မဟုတ်အစီရင်ခံခြင်းမရှိပါ: ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များတင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်နှင့်မျှမတို့မဖြစ်မနေစာရင်းစစ်ကြပါဘူး။
• အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေး: အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးအဆိုပါ BVI အတွက်တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: 1672 ကတည်းက BVI တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်အတူဗြိတိသျှနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
BVI LLC ဥပဒေရေးရာ Matters
BVI လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
တိုင်း LLC ကိုအခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့အမည် BVI အတွက်ထံမှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီအမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။
ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစားအားလုံး (အစုရှယ်ယာသို့မဟုတ်အာမခံချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထား) က၎င်း၏၏အဆုံးမှာစကားလုံး (s) "ကော်ပိုရေးရှင်း", "လီမိတက်", "ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း", "Sociedad Anonima" သို့မဟုတ် "Societe Anonymous" တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုရမည် အမည်ဖြစ်တယ်။ ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာခုနှစ်တွင်ဤအတိုကောက်များထဲမှအစားစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများအသုံးပြုခဲ့မည်အကြောင်း: "ကော်ပိုရေးရှင်း", ", Ltd" "Inc မှ" သို့မဟုတ် "လုပ် SA" ။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်န့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုပျော်မွေ့နေချိန်မှာကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကရှယ်ယာရှင်များ LLC သည်၏ကြွေးမြီများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားမှကာကွယ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသီးအသီးရှယ်ယာရှင် LLC သည်၏အကြွေးပျောက်ပါစေတစ်ခုတည်းသောရန်ပုံငွေအဖြစ် LLC ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်မှလှူဒါန်းခဲ့ပမာဏကိုထွက်ခွာမည်။ တစ်ဦးချင်းစီရှယ်ယာရှင်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု LLC သည်ရဲ့အကြွေးများက seizure မှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်အပြည့်အဝသူသို့မဟုတ် LLC သည်အတွက်ရှယ်ယာများအတွက်ပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, အကြွေးကြောင်းပမာဏကို LLC သည်ရဲ့အကြွေးများက လိုက်. နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေကအလွန်ရှင်းပါတယ် LLC သည်ယင်း၏ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာဝိသေသလက္ခဏာရှိကြောင်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦး LLC ကြွေးရှင်ကုမ္ပဏီ၏အကြွေးတွေကျော်တစ်ဦးရှယ်ယာရှင်တရားစွဲဆိုလို့မရပါဘူး။ ကုမ္ပဏီအကြွေးမြီသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုကိုမြှုတ်အခါရှယ်ယာရှင် LLC သည်ကိုယ်စားပြုမူလျှင်မည်သို့ပင်သည်, ကြွေးရှင် LLC သည်ရဲ့ကြွေးမြီသို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုအဘို့အကိုယျတိုငျရှယ်ယာရှင်တရားစွဲရန်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ BVI LLC သည်ရဲ့အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်တွေရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. လျှို့ဝှက်ရည်မှတ်အသေးစိတ်ကိုလိုအပ်သည်။
LLC သည်ရှယ်ယာရှင်များမှာတစ်မှတ်ပုံတင်မည်, ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်မည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမယ်နေစဉ်; ဤအပြည့်စုံလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထားရှိမည်နှင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်ရှယ်ယာရှင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုဤစာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သောအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင် (လျှော့, "မှတ်ပုံတင်") နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအသင်းနှင့်အသင်းဆောင်းပါးများ၏စာချွန်လွှာများပါဝင်သည်။
•ရှယ်ယာများ၏အတန်း (တစ်ဦးထက်ပိုလူတန်းစားအဲဒီမှာဖြစ်နိုင်သည်) တစ်ဦးချင်းစီဝေစုအတန်းအစားမှပူးတွဲပါအခွင့်ထူး, အခွင့်အရေး, နှင့်ကန့်သတ်အပါအဝငျ။
အဆိုပါစာချွန်လွှာအထူးသထိုကဲ့သို့သောနောက်ထပ်ရှယ်ယာအထောက်အကူပြုနှင့်တာဝန်ယူမှုကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရမည်ဖြစ်သည်သည့်အခါသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ချက်အဖြစ်ရှယ်ယာရှင်များအပျေါမှာအပိုဆောင်း liabilities ဘို့ပေးနိုင်ပါသည်။
ရှယ်ယာရှင်အဆိုပါ BVI နေထိုင်ရန်မလိုပါနှင့်မည်သည့်တိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားများဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာခွင့်ပြုထားပါသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်ပိုင်ရှင်များ၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏ရုံးခန်းထဲမှာလိုင်စင်ရအုပ်ထိန်းသူများကစံချိန်အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤမှတ်တမ်းသည်ပုဂ္ဂလိကနှင့်လျှို့ဝှက်နေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူး LLC သည်စီမံခန့်ခွဲခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာနိုင်ငံအားလုံးအနေဖြင့်မည်သည့်တိုင်းပြည်နှင့်နိုင်ငံသားများအတွက်သဘာဝကပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများနေထိုင် (သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်) ရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကတစ်ဦးရှယ်ယာရှင် LLC ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောဒါရိုက်တာအဖြစ်အတူတူပင်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တရားဝင် entity ရှိနိုင်ပါသည်။
တိုင်း LLC သည်အဘယ်သူ၏ရုံးခန်း LLC သည်၏မှတ်ပုံတင်ရုံးဖြစ်နိုင်သည်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျရမယျ။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဒါရိုက်တာ၏မှတ်တမ်းများ, ရှယ်ယာရှင်များ, ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်လျှို့ဝှက်ရှိနေဆဲနှင့်အစိုးရနဲ့အတူတင်သွင်းမဟုတ်သလိုအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ဘယ်တော့မှမရှိကြသည့်အစည်းအဝေးကိုမိနစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ LLC ရဲ့မျှသာခွင့်ရှယ်ယာ၎င်း၏စာချွန်လွှာအတွက်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်မည်မျှဖော်ပြရပါမည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေက၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များမှတစ်ဦးချင်းစီဖြန့်ဝေပြီးနောက်မရရှိနိုင်ပါငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အဆက်မပြတ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအောင်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးမျှတသောစာရွက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တိုင်းကုမ္ပဏီလိုအပ်သည်။ ဖြန့်ဝေထားကြပါတယ်သောအခါ, ရှယ်ယာရှင်များတစ်အများစုအားဖြင့်ချမှတ်သည့်ဖြန့်ဝေကို authorize တစ် resolution ကိုဖြန့်ဖြူးပြီးနောက်၎င်း၏ solvency ၏ကြေညာချက်ပါဝင်ရမည်။
LLC ရဲ့ဝင်ငွေ, ကော်ပိုရိတ်, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, အိမ်ခြံမြေ, အမွေဥစ္စာ, ဆုကြေးဇူးကို, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များအပါအဝင်အားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်း IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ သူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရမယ်သူကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အားလုံးတခြားသူတွေကိုအတူတူ။
LLC ရဲ့အစိုးရနှင့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်အကောင့်မှတ်တမ်းများ file မှမလိုအပ်ပါ။ မှတ်တမ်းများကုမ္ပဏီ၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေဖေါ်ပြခြင်းပုံမှန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလေ့အထများအောက်ပါထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းတစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းများအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်တွေ, ဒါရိုက်တာ, သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များဆံ့မထားတဲ့အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာနှင့်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့3ထံမှ5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ယူနိုငျသညျ။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ BVI ရောင်းချမည့်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးက BVI လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ: ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်ငွေ, လျှို့ဝှက်, ပုဂ္ဂလိက, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, ရှယ်ယာဆောင်လုလင်မရှိစာရင်းစစ်သို့မဟုတ်အစီရင်ခံ, အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာစီးပွားရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။